Sony ga-akwụsị ire ere na America, Africa na akụkụ nke Asia | Gam akporosis
Sony abụwo otu n'ime ụdị ndị kachasị mkpa na nke kacha mma na-ere na gam akporo. Ọ bụ ezie na n'afọ ndị na-adịbeghị anya ọnọdụ agbanweela maka ụlọ ọrụ ahụ, na afọ a enweela nkeji iri na ise kachasị njọ. N'ihi ahia ya na-adịghị mma, nke hụworo mbelata dị ịrịba ama ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ ahụ ahọrọla ịmegharị usoro ya. Ya mere lekwasị anya na ahịa ndị na-enye gị nsonaazụ kacha mma.
Nke a chere na ọnwa ole na ole gara aga ka a mara ọkwa ya que Sony ga-akwụsị ire igwe ha na Latin America. Mkpebi ha mere n'ihi adịghị mma ahịa ha n'ahịa ndị a. Ugbu a, anyị nwere nkọwa niile gbasara atụmatụ a, nke pụtara na ụlọ ọrụ si na ahịa ndị ọzọ pụọ.
Companylọ ọrụ anaghị enye aka na mpaghara ama. N'ihi nke a, ha ga-aga n'ihu na-ebupụta igwe na ụlọ ahịa, n'agbanyeghị na ha na-ewebata usoro ọhụụ, nke ha nwere olile anya iji nweta nsonaazụ kacha mma. Ihe ha na-eme bụ ilekwasị anya na ahịa ndị ahụ ebe ha na-eme nke ọma. Nzọ ezi uche dị na gị.
1 Sony kwụsịrị ire na America
2 Atụmatụ ọhụrụ
Sony kwụsịrị ire na America
Latin America bụ ahịa mbụ nke Sony gosipụtara na ọ kwụsịrị ire igwe. Mgbe ekwuputara nke a, ekwerela na ụlọ ọrụ ahụ ga-akpọsa mba ndị ọzọ nke ọ na-aga ịkwụsị ire ngwaọrụ ya. Oge eruola, yabụ anyị mechara nweta data a, nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kesara.
Companylọ ọrụ ahụ ahọrọla ịbelata ọnụ ọgụgụ ahịa nke ha na-ere ekwentị ha. Ebe ọ bụ na ha kwadoro ilekwasị anya n'ahịa ole na ole, dị ka anyị nwere ike ịhụ na foto a dị elu, nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya kesara na blog ya. N'ụzọ nke a, Sony ga-elekwasị anya na Japan, Taiwan, Hong Kong na ụfọdụ ahịa ndị isi na Europe. Ha bụ mba ndị ha na-ere nke kachasị mma, yabụ ha biri n'ime ha.
Nke a pụtara na e nwere ụfọdụ ahịa ebe Sony ga-akwụsị ire. Na Latin America ekwenyela, a na-agbakwunye ọtụtụ isi ahịa. N'otu aka, Middle East, ebe ụlọ ọrụ ahụ emechabeghị ka ndị ọrụ kwenye. A mara ọkwa ọpụpụ ya na United States na Canada. N'ezie, site na atụmatụ a, ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ire na mpaghara America dum. Africa bụ mpaghara ọzọ ha na-akwụsị ire ere. Ọ bụ ihe ijuanya, n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ nwere nnukwu olile anya n'ahịa a.
Usoro ohuru a kwesiri nyere aka na nsonaazụ kacha mma na nkewa ekwentị. Companylọ ọrụ ahụ jikọtara nkewa a na nkewa ọdịyo na mbido afọ a. Nzọụkwụ mbụ na atụmatụ ọhụrụ a, nke ha na-achọ iji melite nsonaazụ ha kachasị. Na mgbakwunye, enwerekwa mgbanwe na ọkwa nke ekwentị ndị emepere n’ahịa.
N'otu aka, ọ dị ka nke ahụ A na-ewepụta usoro ekwentị kọmpat. Ọ dịkarịa ala, e nweelarị asịrị maka ọnwa ole na ole gbasara atụmatụ Sony ga-ekwe omume na nke a. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ ahapụla anyị n'oge na-adịbeghị anya a inch ise na ekwentị, O juru onye ọ bụla anya. Mana usoro a enweghị ọdịnihu dị ukwuu, na a ahịa nke anyị na-ahụ onwe anyị na-esiwanye ibu meziri na smartphones.
Ọzọkwa, Sony kpaliri mmepụta nke ekwentị ya. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara ekwentị ya na China. Ma mmepụta a dị oke ọnụ, nke mere ka ụlọ ọrụ ahụ chọta ebe ọhụụ maka ya. Vietnam bụ mba ahọpụtara n'akụkụ a. Nkwekorita iji belata mmefu, nke nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka iji melite nsonaazụ nke telephony nke ụlọ ọrụ a. Ya mere, anyị ga-ahụ ma mgbanwe ndị a nke ụlọ ọrụ ahụ na-ewebata ga-enyere aka maka nkewa nke smartphones nke ụlọ ọrụ ahụ. Gịnị ka unu chere gbasara atụmatụ ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Sony weputara usoro ohuru ya maka ekwenti